» ३९ वटै कम्पनीमा बीमा समितिको छड्के, केही कम्पनी तनावमा
३९ वटै कम्पनीमा बीमा समितिको छड्के, केही कम्पनी तनावमा
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:३८
काठमाडौं । बीमा समितिले नेपालमा सञ्चालित ३९ वटै बीमा कम्पनीहरुमा आकस्मिक रुपमा छड्के जाँच गरेको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले आर्थिक वर्षको पहिलो दिन निर्जिवन तथा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा आकस्मिक निरिक्षण गरेको हो । सो क्रममा भेटिएका कैफियतको आधारमा निर्णय लिइने बीमा समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएकोले सो अनुसारको हिसाब किताब फाइनल गरे नगरेको, सही तरिकाले हिसाब किताब राखे नराखेको तथा पुरानो मितिमा चेकहरु काट्न नदिन बीमा समितिले छड्के जाँ गरेको हो । नियामक निकायको टोली विहान बीमा कम्पनीहरु आईपुगेपछि केही कम्पनीहरु भने तनावमा परेको बताइएको छ ।
कम्पनीहरुमा अनुगमनमा जानु पूर्व बीमा समितिमा तयारी गरिदै । तस्विरः बीमापोष्ट
आज विहान ११ः०० बीमा समितिले ३९ वटा टोली बनाएर कम्पनीहरुमा छड्के (निरिक्षण) लागि पठाएको बीमा समितिका प्रबक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । यतिबेला बीमा समितिको टोलीहरु फर्कने क्रममा रहेका छन् । विहान ११ः०० पत्रसहित बीमा समितिबाट निस्किएको टोली ११ः३० बजेभित्र सबै बीमा कम्पनीहरुमा पुगेर निरिक्षण गरेका छन् ।
बीमा समितिको टोली कम्पनीहरुमा छड्केमा जानुअघि सबैलाई बीमा समितिकै हलमा राखेर आवश्यक निर्देशन दिइएको थियो । समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्देशन दिएका थिए । बीमा समिति स्रोतका अनुसार पूर्व सूचना नदिई कर्मचारीहरुलाई छड्केमा पठाएको हो । केही कम्पनीहरुले पूर्व सूचना पाएपछि अपुग कागजात मिलाएको बुझिएको छ । बीमा समितिबाट टोली परिचालन हुने वित्तिकै सबै बीमा कम्पनीहरुमा सूचना पुगिसकेको एक बीमा कम्पनीका सिईओले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुमा अनुगमनका लागि गएका अधिकांश कर्मचारीहरु केहीबेर अघि बीमा समितिमा फर्किसकेका छन् ।
निरिक्षणको क्रममा केही कम्पनीहरुमा कैफियत देखिएपछि तनावमा परेको जनाइएको छ । यद्यपि बीमा समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
One thought on “३९ वटै कम्पनीमा बीमा समितिको छड्के, केही कम्पनी तनावमा”
दुलि चन्द मेहता सुनसरी says:
नेपाल राष्ट्रिय बिमा कम्पनी को कोरोन बिमा बारेमा जानकारी के छ
अध्यक्ष सिलवालद्वारा विरोध गर्ने बीमा कम्पनीमाथि कारवाही गर्ने धम्की
बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध बीमक संघको दोस्रो बैठक सम्पन्न, अध्यक्ष सिलवाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी
एशियन लाइफको “बाल उच्च शिक्षा (अग्रिम भुक्तानी सावधिक) ” जीवन बीमा योजना सार्वजनिक, सुविधाहरु यस्ता छन्
लघुबीमाको विकासको लागि मेटलाइफको प्रतिबद्धता, दावी व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात
पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनमा बीमक संघका केही पदाधिकारीबाट आएका धारणाप्रति बीमा समितिको ध्यानाकर्षण
चार महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क आर्जन साढे ४८ अर्ब माथि,नेपाल लाइफको अग्रता कायमै, कुनको कति ?
नेपाल पुनर्बीमाको चौथौ त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक, जीवन बीमाको नाफा बढ्यो निर्जीवनको घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
एनएलजी इन्स्योरेन्सद्धारा बीमा सर्भेयरको लागि सूचिकृत हुन आह्वान
सर्लाहीको हरिऔनमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखा